Saameynta Robot-yada Mustaqbalka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Cumar Maxamed — October 3, 2020
Aalada casriga ah ee loo yaqaan Robotic ama Robots-ka waa mashiino soo shaac baxay dhexdhexaadkii qarnigii 20aad aadna u qabsaday dunida qarnigan hada lagu jiro ee 21aad. Mashiinadan waa aalodo tikjnoolajiyadeed hoos taga daraasad cilmiyeedka oo loo yaqaan Artificial Intelligence oo ah in mashiinada loo borogaraamiyo in ay u dhaqmaan sida bini’aadamka oo kale.
Mashiinadan waxa ay arag ahaan ku shaqeeyaan aaladaha araga sida kaamirooyinka iyo ilaha artificial-ka ah, maqal ahaanna waxay u isticmaalaan microphones-ka. Aalada robotka waxa laga sameeyaa matooro isku tagay iyo jir artifical ah, waxaana hago ama koontoroolo badanaa bini’aadamka laakiin mustaqbalka dhaw waxaa la rajeenayaa in robot-yadu ayaga 100% iskood wax u qaban doonaan si atomatik ahna loo borogaraamiyo.
Sida aan wada ogsoonahay waxaa lagu jiraa qarniga 21aad oo ah qarni ku caan baxay tiknoolajiyada, loogu magac darayna “qarnigii tiknoolajiyada”. Qarnigan waa qarni adduun weynaha uu ku loolantamaayo soo saarida mashiinada casriga ah ee Robots-ka haddii ay ahaato robot-yo qabanaayo howlo kala duwan sida: Robot kabalyeeri ah, Robot darawal ah iyo mid askari ah oo loo addeegsado dagaalada. Aaladan robot-ka waa aalad badashay nolosha aadanaha sanadihii u danbeeyay, ayadoo ku yeelatay nolosha bini’aadamka saameyn aad u weyn.
Injineerada naqshadeeya Robots-ka ayaa ku howlan in mustaqbalka dhow robot-yada loo ekeesiiyo sida bini’aadamka oo kale. Waxay injineeradu kadhigi doonaan robot-yada kuwa leh jidh artificial ah oo u ek kan aadanaha, timo buruko ah iyo indho kamuuqaal sareeya kuwa bini’aadamka, sidoo kale in robot-ka uu dareemi karo taabashada, la dhaqmi karo aadanaha.
Robot-yada shaqooyin badan bay la wareegi doonaan mustaqbalka
Waqtigan lagu jiro Robot-yadu waxa ay si tartiib ah ula wareegayaan shaqooyin badan oo awal bini’aadamka qaban jiray sida in ay robot-yadu kashaqeeyaan maqaayadaha, noqdaan kuwa dalabka qaada sidoo kale robot-yada waxa ay noqdeen kuwa awood u leh in ay sameeyaan kafeyga, waxay kaloo qabtaan shaqooyin badan sida in ay haggaajiyaan guryaha, wadi karaan gawaarida, noqdaanna kuwa tilmaamaha bixiya.
Inkastoo shaqooyinkan aysan 100% la wareegin robot-yada laakiin waxaa soo badanaya ganacsadayaasha adeegsado robots-ka. Waxaa la saadaaliyay in mustaqbalka dhaw 2077 iyo wixii kadanbeeyo 40% shaqooyinka lawareegi doonaan robot-yada, waxaa kaloo laga cabsi qabaa in robot-yadu lawareegaan shaqooyin-ka kusaleysan maamulka.
Tags: Saameynta Robot-yada Mustaqbalka
Next post Wax Kabaro Cilmiga Dhaqaalaha
Previous post Qorshayaasha Sahyuuniyadda ‘Zionist’ ee Bariga Dhexe